विद्वता र अनुभव मर्माहत हुने नियुक्ती
आज मेरो देशको ठूलो ओहदाको पद खाली भयो । त्यस ओहदामा आफ्नो कार्यावधी नै पुरा गर्न नपाई हाकीम सावले राजिनामा दिनुभएको रे । उहाँले किन राजिनामा दिनुभयो त्यतातिर सोधिखोजी गर्ने मलाई पटक्कै जाँगर चलेन किनकी मेरो देशमा प्रायः यस्तो भइरहन्छ । त्यसैले । तर आज…
'कालापहाड धाउनुपर्ने अप्राविधिक शिक्षामा सुधार हुन्छ' : मन्त्री रावल
६ चैत्र । कर्णाली प्रदेशको विकासको लागि प्राविधिक शिक्षाको खाँचो भएको सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले बताएका छन् । आइए विए र एमए पढेर भारतका कालापहाड र खाडि मुलुकमा जानुपर्ने अप्राविधिक शिक्षाको साटो प्राविधिक शिक्षाको विकास तर्फ लाग्ने उनको भनाइ छ । नेताले…
आवश्यकताले जन्माएको जीवन उपयोगी शिक्षा
पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकको अन्तरवस्तु र शैक्षणीक योजना नमूना तथा मूल्याँकनको भावनात्मक सम्वन्ध शिकारुको रुची, चाहाना र स्थानीय आवश्यकता बाट प्रतिविम्वीत भइ कक्षाकोठामा विद्यार्थीलाइ मालिकको रुपमा प्रस्तुत हुन दिने अवसरको सृजना गर्नुनै शैक्षिक गुणस्तरको एक महत्वपुर्ण भागको रुपमा लिन सकिन्छ । वदलिंदो समय परिस्थिति र उच्चतम…
‘दबंग द टुर नेपाल’को विरोध किन?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घले फागुन १५ गते प्रेस विज्ञप्तिद्वारा नेपालको राजधानीमा अवस्थित सैनिक मञ्चमा फागुन २६ गते अर्थात् मार्च १० मा आयोजना गरिएको भारतीय अभिनेता सलमान खान सम्मिलित ‘दबंग द टुर नेपाल’ कार्यक्रमको सशक्त विरोध गर्‍यो । महासङ्घको आधिकारिक विज्ञप्ति…
सरकारले शान्ति अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्छ : द्वन्द्वविद् भण्डारी
चिरन्जीबी भण्डारी द्वन्द्वअध्येता हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत द्वन्द्व, शान्ति र विकास विषयका उप–प्राध्यापक भण्डारीसंग सेरोफेरोले द्वन्द्व र शान्ति अध्ययनको महत्व बारे कुराकानी गरेको छ । नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयहरुमा द्वन्द्व र शान्ति अध्ययनको शुरुवात किन भयो? यसको क्षेत्र र आवश्यकताको औचित्य, नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई…
ज्योति मगरको उखरमाउलो बैंश (भिडियो)
१९ फागुन । ज्योति मगरले आफ्नो साँगितिक यात्रालाई अविराम अघि बढाउने बताएकी छन् । सेरोफेरोसंगको कुराकानीमा उनले ग्ल्यामरलाई सुन्दरताको पर्यायको रुपमा पनि अर्थ्याएकी छन् । उनले भनिन्, 'मैले लगाउने लुगाले मलाई सहज नै भएको छ । मेरा दर्शकहरुले पनि सहज नै महसुस गर्नुभएको छ…
प्रेम र विवाह एकअर्काका परिपूरक हुन् भन्ने मान्यता छ, पूर्वीय परम्परामा। प्रेमपछिको विवाह वा विवाहपछिको प्रेम भन्ने भनाइ पनि छ। पूर्वीय परम्परामा दुवै किसिमको व्यवस्था भएको बुझिन्छ। धर्मशास्त्रमा बताइएका ८ प्रकारका विवाहमध्ये ब्राह्म, आर्ष, प्राजापत्य र दैव लाई उत्कृष्टको कोटिमा राखिएको छ। ब्राह्म विवाह–…